မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး - ယူအက်စ်အေမှသင့်မိသားစုကိုရောက်စေ | USAHello | USAHello
မိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး - ယူအက်စ်အေမှသင့်မိသားစုကိုရောက်စေ
သငျသညျပြန်လည်နေရာချထားခဲ့ကြပြီးနောက်သင်သည်သင်၏မိသားစုဝင်များသင်သည် join ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာရှိသည်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. ဤသည်မှာမိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဟုချေါသညျ.
မိုက်ကယ် Swan ဓာတ်ပုံယဉျကြေး, CC ကို.
သင်အတိတ်အတွင်းဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဝင်. ပါလျှင်2နှစ်သို့မဟုတ်အတိတ်ကာလအတွင်း asylee status ကိုပေးသနားခဲ့သည်2အနှစ်, သင် "ဆင်းသက်လာ" ဒုက္ခသည်သို့မဟုတ် asylee status ကိုရရှိရန်သေချာသောမိသားစုဝင်များများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. ဤသည်တို့သည်သင်တို့၏မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့က USA တွင်ဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သည်ကိုဆိုလိုတယ်. သာအချို့မိသားစုဝင်များ "ဆင်းသက်လာ" ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါသည်: သင့်အိမ်ထောင်ဖက် (ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီး) သို့မဟုတ်သင့်ကလေးများ (လက်မထပ်ရသေးနှင့်အောက်တွင် 21 သင်ပထမဦးဆုံးခိုလှုံခွင့်သို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်အဖြစ်လျှောက်ထားသည့်အခါ).
သင်တို့သည်လည်းဒုက္ခသည်များ USA တွင်သင်သည် join အဖြစ်ပြီးသားဖော်ထုတ်နေသောမိသားစုဝင်များရှိသည်ဖို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဒါမှမဟုတ်သားသမီးမိသားစုပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအစီအစဉ်အောက်ရှိ USA တွင်သင်သည် join ရှိသည်ဖို့ကိုတောင်းဆိုနိုင်ရန်အတွက်, သင်တစ်ဦးကိုခေါ်ဘာဖြစ်ရပါမည် “ကြောငျးအုပျကွီး” ဒုက္ခသည်သို့မဟုတ် asylee. ဒါဟာသင်အရာရှိတဦးကဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းကိုလက်ခံရရှိကြောင်းလူတစ်ဦးခဲ့ကြသည်နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအမေရိကန်ရုံးကနေတဆင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှလာသည်ဟုဆိုလိုတယ်. သင်ကအတိတ်အတွင်းဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဝင်. ကြရမယ်2နှစ်သို့မဟုတ်အတိတ်ကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးသနားခဲ့ကြ2အနှစ်. သငျသညျဒုက္ခသည်သို့မဟုတ် asylee status ကိုအတွက်ဆက်လက်ရှိနေရမယ်သို့မဟုတ်တစ်အရာကိုပြုသင့်သည်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လာကြပါပြီ (အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုလက်ခံရရှိ).
သင်တို့သည်လည်းကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်အဘို့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကျမ်းကျိန်လွှာ file ခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်, ကလေး (လက်မထပ်ရသေး, အောက် 21), သို့မဟုတ်မိဘများ. ဆက်ဆံရေး၏ကျမ်းကျိန်လွှာနေသောဆွေမျိုးနီးစပ်နှင့်အတူဒုက္ခသည်များနှင့် asylees ပြန်လည်ပူးပေါင်းဖို့အသုံးပြုပုံစံဖြစ်ပါသည် ပြီးပြီ ဒုက္ခသည်များဖြစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိနေကြသည်. ဆက်ဆံရေး၏ကျမ်းကျိန်လွှာမိသားစုဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင်. အဆိုပါကျမ်းကျိန်လွှာအမေရိကန်ဒုက္ခသည်အဆင့်လက်ခံရေးအစီအစဉ်မှတဆင့်ဒုက္ခသည်များအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝင်ခွင့်ဖြစ်နိုင်သည်သူကိုဆွေမျိုးသားချင်းများအတွက်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်အပြီးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်. သင့်အနေဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့လာမယ့်ငါးနှစ်အတွင်းဤလျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်. ဖိုင်အရည်အချင်းပြည့်မီလက်ရှိလူမျိုးစုများအပေါ်သိရှိလိုပါက, ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန, ပြည်သူ့အင်အားဗျူရို, ဒုက္ခသည်များ & ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း.
အမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ်ဂြိုလ်သား status ကိုအတူဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာဘယ်သူထက်ပိုငါးနှစ်အိမ်ထောင်ဖက်၏ကိုယ်စားလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် US မှာဖြစ်ရပြီ, ကလေးများ, မိဘများ, နှင့် Form ကိုငါ-130 ကိုအသုံးပြုပြီးမောင်နှမ. ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုအချိန် ယူ. အထက်ပါနှစ်ခုအစီအစဉ်များထက် ပို. ခက်ခဲစေခြင်းငှါ. အဆိုပါ USCIS ဖတ်ရှုပါ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၏မိသားစု ပိုမိုသိရှိလိုပါကစာမျက်နှာ.
သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရောက် လာ. သို့မဟုတ်ခိုလှုံခွင့်ပေးသနားခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထိုမိသားစုဆက်ဆံရေးဟာတည်ရှိခဲ့. ဆိုလိုတာက:
သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်အမေရိကန်ထံသို့လာရှိသည်ဖို့စာတမ်းများဖြည့်စွက်ချင်တယ်ဆိုရင်, သင်ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်အမေရိကန်ဆီသို့ရောက် လာ. , မတိုင်မီလက်ထပ်ကြရသည်သို့မဟုတ် US မှာခိုလှုံခွင့်ပေးသနားခဲ့သည်. အဆိုပါ USCIS သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ဒုက္ခသည် & Asylee အိမ်ထောင်ဘက် ပိုမိုသိရှိလိုပါကစာမျက်နှာ.
သင့်ကလေးပဋိသန္ဓေယူကြရသည် (ဒီမိခင်ပြီးသားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတယ်) သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်ဝင်ကြ၏သို့မဟုတ်ခိုလှုံခွင့်ပေးသနားခဲ့သည်မတိုင်မီသို့မဟုတ်မွေးဖွား. အဆိုပါ USCIS သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး ဒုက္ခသည် & Asylee ကလေးများ ပိုမိုသိရှိလိုပါကစာမျက်နှာ.
သငျသညျဒုက္ခသည်သို့မဟုတ် asylee status ကိုအတွက်ဆက်လက်တည်ရှိတစ်ခုသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လာကြပါပြီ (အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုလက်ခံရရှိ). သငျသညျပြီးသားတစ်ဦး U.S ဖြစ်လာကြလျှင်. အဖြစ်ပြောင်းလဲမှတဆင့်နိုင်ငံသား, သင်တစ်ဦးဆွေမျိုးများအတွက်ဆင်းသက်လာဒုက္ခသည်သို့မဟုတ် asylee status ကိုရရှိရန်အယူခံလွှာတင်ရေးနိုင်ဘူး. သို့သော်, သင်ဆဲ United States ကိုမိသားစုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကကူညီနိုင်မည်အကြောင်း.
ဆက်ဆံရေးအစီအစဉ်၏ကျမ်းကျိန်လွှာလက်အောက်တွင်, သင်သည်သင်၏သားသမီးတို့အဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, ဇနီး, သို့မဟုတ်မိဘများကိုအမေရိကန်လာရန်.
ဒုက္ခသည်များအဖြစ်အမေရိကန်ထံသို့လာရန်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်သားသမီးတို့အဘို့လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည် Form ကိုငါ-730, သို့မဟုတ်ဒုက္ခသည် / Asylee ဆွေမျိုးအသနားခံစာ. ဤပုံစံ file အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျလျှောက်ထားတဲ့အခါသင်အတော်ကြာအရေးကြီးသောတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများထည့်သွင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. အခါသင် Form ကိုငါ-730 ကို download လုပ်ပါ, အဆိုပါဖတ်ရှုဖို့လည်းသေချာပါစေ တာဝန်ရှိသူတဦးက USCIS Form ကိုငါ-730 သတင်းအချက်အလက်များ ပြီးနောက် ပုံစံတင်ပို့ရန်ဘို့ညွှန်ကြားချက် Form ကိုငါ-730.
ဥပဒေရေးရာပုံစံများ Completing အလွန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီထံမှအကူအညီတောင်းခံသို့မဟုတ် တစ်ဦးကိုရှာဖွေ ရှေ့နေသို့မဟုတ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကူညီပေးသည်ကြောင်းဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းက. မှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်ဘာသာစကားများပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ IRAP.
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအချက်အလက်တွေကနေကြွလာ ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန, USCIS, နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.